ဒေါက်တာဇော်ကြီး (Dr, Zaw Gyie): 01/23/13
ဒေါက်တာဇော်ကြီး (Dr, Zaw Gyie)
www.drzawgyie.blogspot.com ဒီမှာလာပြီး sex အကြောင်း ဗဟုသုတရှာနေကြတဲ့ sex ချစ်သူပရိသတ်အပေါင်း မင်္ဂလာပါခဗျာ ဒီဆိုဒ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် sex ချစ်သူ ဝါသနာတူသူအားလုံးအတွက် ကျွန်နော်ဒေါက်တာဇော်ကြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းထိမ်းချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ဆက်စပ်ထားခြင်းမရှိပါ ဒါ့ကြောင့် တင်ထားသောပိုစ့်တွေမှာ အဆင်ပြေတာလေးတွေရော အဆင်မပြေတာလေးတွေရော ရှိချင်ရှိပါမယ် အားလုံးကိုသည်းခံပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသွားကြပါစေလိုကြောင်း ကျွန်နော်ဒေါက်တာဇော်ကြီးမှ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....။
We don't allow watch and read below 18 year old in this site. အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များ ကြည့်ခွင့်ဖတ်ခွင့်မပြုပါ......၊ ခွင့်ပြုချက်မလိုက်နာပဲ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်ဝင်ကြည့်ပြီး ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ...........။ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ကဲ မဲပေးထားတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် အချစ်ဇာတ်ကားလေးလာပြီဗျို့........။
ထိုင်းအချစ်ဇာတ်ကားလေးပါ ပုံစံကတော့ဒီလိုပါ ရည်းစားအတွက်နဲ့လူသတ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ဦးအကြောင်းကို တရားခံအစစ်အမှန်ကိုပြန်ပေါ်လာအောင် ဖြေရှင်းပြတဲ့အကြောင်းလေးပါ ဆော်လေးတစ်ဗွေဟာ စံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ ကြက်မလုပ်စားနေတာပါ အဲ့ဒါကိုဘဲတစ်ဗွေကကောက်ကြိုက်ပြီးချစ်သူအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်တယ် နောက်ပြီးတော့
အဲဒီဘဲတစ်ဗွေဟာ မကြာမှီမှာပဲ နောက်ထက်ကြက်မလုပ်စားနေတဲ့ဆော်လေးတစ်ဗွေနဲ့................။
မန္တလေး ကန်တော်ကြီးကအတွဲတဲ့ အရင်ကတင်ထားဖူးပါတယ်ပျက်နေတယ်ပြောလို့ပြန်ထပ်တင်တာပါ အားပေးလိုက်ကြပါအုံး.........။
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၄
မန္တလေး ကန်တော်ကြီးမှာ လှန်တော်လီးတဲ့အတွဲလေး အရင်ကတင်ထားဖူးပါတယ် ပျက်နေတယ်ပြောလို့ပြန်တင်လိုက်တာပါ အားပေးလိုက်ကြပါအုံး..........။
ကြည့်မရတဲ့ဆရာတွေ ဒီအောက်မှာကွန်မန့်ပေးခဲ့ပါ တက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးပါမည်........။
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၄,
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၆
ဘာရီးလဲတော့မသိဘူး အထှာရီးနဲ့ ကြည့်ရတာတူသလိုပဲ.(....+.....)..နဲ့ ။
facebook မှာ တွေ့လို့ဆွဲလာ၏.......... ဆရာတွေအောက်မှာကြိုက်သလိုမန့်နိုင်၏...........။
ယနေ့မြန်မာ ငွေဈေး
ဂျပန်ဇတ်ကား အတွဲ - ၃
ဂျပန်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
ဂျပန်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၁
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၂
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၃
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၄
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၅
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၆
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၇
ဇာတ်ကြမ်းကား အတွဲ - ၈
တရုတ်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
တရုတ်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
တရုတ်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၃
ထိုင်းဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
ထိုင်းဇာတ်ကား အတွဲ - ၃
ထိုင်းဇာတ်ကား အတွဲ - ၄
ထုင်းဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၃
ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကား အတွဲ - ၄
မလေးရှားဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
မလေးရှားဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
မလေးရှားဇာတ်ကား အတွဲ - ၃
မလေးရှားဇာတ်ကား အတွဲ - ၄
မလေးရှားဇာတ်ကား အတွဲ - ၅
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၁
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၂
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၃
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၄
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၆
ရုပ်ပြကာတွန်း - ၇
ရှားပါး ရှေးမြန်မာ ဓာတ်ပုံများ
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၀
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၁
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၂
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၃
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၄
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၅
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၆
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၁၇
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၃
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၄
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၅
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၆
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၇
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၈
ဝတ္ထုစာအုပ်စင် - ၉
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း - ၁၀
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၁
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၂
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၃
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၄
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၅
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၇
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၈
အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း အတွဲ ၉
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၁
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၂
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၃
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၅
မြန်မာဇာတ်ကား အတွဲ - ၆
တိုက်ရိုတ် မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြား
cbox ထဲတွင် ဒေါက်တာဇော်ကြီး ပါဝင်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ..။
ကုန်ကြမ်းများ drzawgyie1love@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်.။. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.